Izixazululo ze-Robotic unscrinji FANUC UMBONO
Faka kungobo yomlando kusigaba "Unscrack"
ULwesihlanu, 08 Meyi 2020 by UCristina Maria Sunea
Ibhodlela elayisha imigqomo
Umshini wokulayisha ibhodlela, osetshenziselwa ukuvumela opharetha ukuba bafake izikhwama ezingenalutho, okokugcoba, amaphakethe amabhodlela emgqonyeni. Zibe sezilayishwa kancane kancane ukuze zondle umuntu ongathembeki.
Ishicilelwe ku Ukungabhuli
Isikhethi sebhodlela - inhloko eyi-1
I-flexpicker iyi-unscrambler yebhodlela esebenzisa umbono wokuqashelwa kwamabhodlela ne-irobhothi lokubamba nokuma kwamabhodlela.
Ingaphatha imiqondo eyehlukene yemikhiqizo (ukusuka ku-50ml kuze kufike ku-5L) nezimo ezihlukile zamabhodlela (eziyindilinga, okusaqanda nesikwele).
Isikhethi sebhodlela - amakhanda ama-2
Umuntu okhetha ibhodlela uyibhodlela elingahloniphi elisebenzisa umbono wokuqashelwa kwamabhodlela ne-irobhothi lokubamba nokuma kwamabhodlela.
Lo mshini usetshenziselwa ukubeka imikhiqizo ngaphansi kwama-drailer conveyors ngemuva kwemishini yokushaya nokwehlisa nokuhambisa emigqeni yokugcwalisa.
ULwesithathu, Julayi 13, 2016 by UCristina Maria Sunea
Isistimu yokulayisha i-Pallet
Isistimu yokulayisha i-Pallet yakhelwe ukwehlisa amapharagi nezikhwama, amathreyidi emgqonyeni womuntu ongathembeki. Iyakwazi ukuphatha ama-pallets aze afike ku-2.4 m.
Ithebula elipholile - ukusebenza uhlangothi olulodwa
Ukuphola kwetafula kokusebenza kohlangothi olulodwa ukupakisha amabhodlela emathileyi kububanzi obufika ku-1200 mm kanye nesihambisi sokudonsela phansi esinama-max 6000 mm ubude.
Iyunithi yokulungisa inkinga
Umshini wokudonsa amabhodlela nxazonke / okusaqanda okufika kumabhodlela angama-3500 ngehora.